बालबालिकामा मोटोपनको ‘महामारी’
घरका पौष्टिक खानेकुरा छाडेर बजारका जंक फूड खाने प्रवृत्तिका कारण बालबालिकाहरू मोटोपनको शिकार मात्र भइरहेका छैनन्, उनीहरूको शारीरिक विकासमै असर परेको छ।
४० लाख डोज मोडर्नाको खोप किन्ने सम्झौता, चैतबाट आउने
सरकारले मोडर्नाको ४० लाख डोज खोप खरीदका लागि सम्झौता गरेको छ।
६५ वर्षमाथिकालाई कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा २५ साउनदेखि
सरकारले कोभिशिल्ड खोपको दोस्रो मात्रा २५ साउनदेखि दिने भएको छ।
बाल अस्पताल बनाउन सानिमा ब्यांकको एक करोड सहयोग सानिमा ब्यांक लिमिटेडले काठमाडौं इन्स्टिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थलाई एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ।
महामारीका वेला छैनन् स्वास्थ्य मन्त्री कोरोना संक्रमण महामारीको संवेदनशील समयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व चयन गरेका छैनन्।
१३ हजारको परीक्षण गर्दा २ हजार ९०५ जनामा संक्रमण पछिल्लो २४ घण्टामा २ हजार ९०५ मा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ।
कुन देशले कति दिए कोरोनाविरुद्धको खोप? अमेरिका, चीन र भारतले कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप सहयोग गरेका छन् भने बेलायतले अगस्टसम्म सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
कसरी गर्न सकिन्छ नेपालमा खोपको न्यायोचित वितरण? कोभिड-१९ विरुद्धको खोपमा उमेरसमूह र संक्रमणको जोखिमसँगै उत्पीडित जातजाति, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न परिवार लगायतलाई दिइने समान पहुँचले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विद्यमान असमानता घटाउन मद्दत पुग्ने मात्र होइन, खोपको उचित प्रयोगबाट महामारी नियन्त्रणमा पनि सघाउ पुग्नेछ।
काठमाडौंसँगै आठ जिल्लामा थपिए ५० भन्दा बढी संक्रमित अझै केही जिल्लामा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या घट्न सकेको छैन। आज काठमाडौंसँगै आठ जिल्लामा ५० भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्।
बीपी प्रतिष्ठानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न कांग्रेसको अपील बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेसले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अपील गरेको छ।
चीनबाट ८ साउनभित्र ४० लाख डाेज खोप आउँदै सरकारले चीनबाट आगामी ८ साउनभित्र ४० लाख डाेज खोप ल्याउने भएको छ।
भेरोसेल खोप खरीदका लागि सम्झौता, २४ असारबाट साप्ताहिक रूपमा आपूर्ति सरकारले भेरोसेल खोप खरीदका लागि चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मसँग सम्झौता गरेको छ।
लक्षण छैन भने १० दिनपछि कोरोना परीक्षण नगराउनु : स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितहरूलाई लक्षण नभए दश दिनपछि परीक्षण नगराउन आग्रह गरेको छ।
‘चीनबाट ४० लाख डोज खोप किन्ने’ समाचार गलतः स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चीनबाट ४० लाख डोज खोप किन्ने विषयमा आएका समाचार गलत भएको बताएको छ।
गण्डकीमा कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार दिने भएको छ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ६५ वर्षभन्दा माथिका नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गर्ने भएको छ।
यी हुन् ‘बाहिरी र भित्री मन’ को उपचार गर्ने नेपाली चिकित्सक, जसबारे लस एन्जलस टाइम्समा यस्तो छापियो
हामीले मानसिक रोगको न्यूरोबायोलोजिकल पद्धतिलाई होशियारीसाथ अनुसरण गर्दै चिकित्सक ऋषभ कोइरालाले झैं संस्कृतिसापेक्ष स्थानीय पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ। भनाइको अर्थ, उपचारका लागि पीडितका भोगाइहरूलाई पनि सम्बोधन गरिदिनुपर्छ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनका लागि प्रधानमन्त्रीले दबाब दिएको भन्दै विरोध
निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दबाब दिएको भन्दै विरोध गरिएको छ।
बीपी प्रतिष्ठान देशकै ‘एक नम्बर’ राजनीतिक अखडाः उपकुलपति गिरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले प्रतिष्ठान देशकै ‘एक नम्बर’ राजनीतिक अखडा भएको बताएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीलाई गालीगलौज गरे एक वर्ष कैद स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई गालीगलौज, अपमानजनक वा अभद्र व्यवहार गर्ने, धम्की दिने र कर्मचारीलाई हातपात गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने भएको छ।
‘भेरिएन्टको कुनै देश हुँदैन’ भाइरस र भेरिएन्ट कुनै देशको हुँदैन। एउटा भाइरसले थुप्रै भेरिएन्ट बनाउँछ। भेरिएन्ट जुन देशमा पत्ता लागेको भए पनि त्यही देशमा उत्पत्ति भएको भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले भेरिएन्टलाई देश होइन वैज्ञानिक नामबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ।
स्वास्थ्यमा रु. १ खर्ब २२ अर्ब विनियोजन सरकारले स्वास्थ्यतर्फ रु. १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड विनियोजन गरेको छ।
महिला स्वयंसेविकाको मासिक भत्ता शतशप्रतिशत वृद्धि सरकारले महिला स्वयंसेविकाको मासिक भत्ता शतप्रतिशत वृद्धि गरेको छ।
के हो कोभिडविरुद्ध प्रभावकारी ‘नर्म मोडल’ ? अन्य दक्षिण एसियाली छिमेकी देशमा झैं, नेपालमा पनि निर्णायक नेतृत्व र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा ‘नर्म मोडल’को शीघ्र कार्यान्वयन सम्भव छ। यसका लागि कुनै पनि किसिमको प्राविधिक सहायता चाहिएमा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धाता टोली सधैं तयार रहनेछ।
औषधि उत्पादक संघले भन्यो– औषधिको अभाव छैन र हुन पनि दिन्नौं नेपाल औषधि उत्पादक संघले कुनै पनि औषधिको अभाव नरहेको बताएको छ।